GNOME 41 beta inosvika ine inovandudza maseru, mapaneru, rutsigiro uye zvimwe | Kubva kuLinux
GNOME 41 beta inosvika ine inovandudza maseru, mapaneru, rutsigiro uye zvimwe
Mazuva mashoma apfuura GNOME 41 Kutanga Beta Kuburitswa Kwakafukurwa, iyo yakaratidza kutonhora pane iyo UI uye API shanduko. Rangarira, GNOME yakachinjira kuchinyorwa chitsva kuverenga, uko vhezheni 40.0 yakaburitswa panzvimbo pe3.40 muchirimo, ichiteverwa nebasa pabazi idzva rakakosha 41.x. Nhamba dzisina kujairika hadzichawirirane neshanduro dzekuyedza, idzo dzave kunzi alpha, beta, uye rc.
Ye shanduko mune ino beta vhezheni yeGNOME 41 rutsigiro rutsva rwezvikamu mune yekuzivisa system inosimbiswaPamusoro pekuti chimiro chesystem chinosanganisira chinongedzo chekufonera kuGNOME Calls, izvo nekuwedzera kufona kuburikidza nevashandisi venhare, yakawedzera rutsigiro rweSIP protocol uye nekufona kuburikidza neVoIP.
Uyewo, GDM ikozvino yave nekwaniso yekutanga zvikamu zvinoenderana neWayland kunyangwe iyo skrini yekupinda yakavakirwa paX.Org uye inobvumidza kushandisa Wayland zvikamu zvehurongwa neNVIDIA GPUs.
Imwe shanduko inomira pachena ndeyekuti mapaneru matsva uye multitasking zvakawedzerwa kune iyo configurator (GNOME Control Center) kudzora chinongedzo kuburikidza nevashandisi venhare uye sarudza mamoditasking modes, pamwe nesarudzo yekuwedzera yekumisa mifananidzo.
Mukuwirirana kwe iyo Calculator yakagadziriswazve, izvo zvino zvinongoerekana zvachinjika kune saizi size pane nhare mbozha.
Iyo yakavakirwa-mukati PDF muoni PDF.js yakagadziridzwa muEpiphany browser uye YouTube ad blocker yakavakirwa pane iyo AdGuard script yakawedzerwa.
Iyo kalendari yekuronga ikozvino inotsigira kupinza zviitiko uye kuvhura ICS mafaera. Chidziro chitsva chakakurudzirwa neruzivo nezve chiitiko.
MuNautilus faira maneja, iyo dialog yekugadzirisa compression yakagadzirwazve uye kugona kugadzira password-yakachengetedzwa ZIP zvinyorwa zvekuwedzera zvakawedzerwa.
Iyo gnome disk inoshandisa LUKS2 yekunyorera. Wakawedzera dialog yekumisikidza muridzi weFS.
A dialog box yekubatanidza yechitatu-bato repositori inodzoserwa kune yekutanga setup wizard.
Iyo GNOME Music interface dhizaini yakachinjwa.
GNOME Shell inopa rutsigiro rwekumhanyisa X11 zvirongwa uchishandisa Xwayland pane masisitimu asingashandise systemd yekutarisira chikamu.
GNOME Mabhokisi anowedzera rutsigiro rwekutamba odhiyo kubva munzvimbo dzinoshandisa VNC kubatanidza.
Kutanga kwakarongerwa Nyamavhuvhu 22, 2021 Uye kune avo vese vanofarira kugona kuziva nhau dzakagadzirirwa, vanopihwa kuyedza kunovaka yeiyo GNOME inoshanda system chirongwa kuyedza iyi GNOME beta 41. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Pakupedzisira, zvakakodzera zvakare kutaura kuti vagadziri veGNOME vaburitsakana katarogu nyowani yeapp, apps.gnome.org, iyo inopa kusarudzwa kweakanakisa mafomu akagadzirwa zvinoenderana nehunyanzvi hwenzanga yeGNOME uye inosangana mushe nedesktop.
Zvikamu zvitatu zvinopihwa: ekushandisa ekutanga, enharaunda anofambidzana zvikumbiro zvakagadzirwa kuburikidza neGNOME Circle chirongwa, uye ekuvandudza manyorerwo. Iyo katarogu inopawo nharembozha inovakwa neGNOME matekinoroji, ayo anoiswa mucherechedzo neakakosha icon.
Pamusoro pehunhu hwekinyorwa, zvinotevera zvinomira pachena:
Tarisa pakubata vashandisi muchirongwa chekusimudzira nekutumira mhinduro, kutora chikamu mukududzira chinongedzo mumitauro yakasiyana, uye nekupa rutsigiro rwemari.
Dudziro shanduro dzinowanikwa kune yakawanda nhamba yemitauro.
Ipa yakagadziridzwa vhezheni yeruzivo zvichibva pane metadata inoshandiswa neGNOME Software uye Flathub.
Kugona kwekubata maficha asiri muFlathub catalog (semuenzaniso, kunyorera kubva kune base base).
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ino nyowani catalog yekushandisa, unogona kubvunza ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » GNOME 41 beta inosvika ine inovandudza maseru, mapaneru, rutsigiro uye zvimwe
Wi-Fi 7 iri kuswedera padyo uye padyo uye Intel inotaura kuti zvichave zvakakosha
Debian 11 inouya neLinux 5.10, zvigadziriso zvepakeji, kugadzirisa uye nezvimwe